Kaddib ciyaartii xalay, Pogba oo si toos ah loo waydiiyay haddii uu ku biirayo Real Madrid… (Muxuu ku jawaabay??) – Gool FM
Taageerayaasha Real Madrid oo codsaday in la fasaxo 17 ciyaartoy dhamaadka xilli ciyaareedkan… (Bale, Modrić & kuwo kale waa weyn oo qeyb ka ah)
Wax ka ogoow 37 koox ee uu Cristiano Ronaldo ka dhaliyay seddexleey!
Jordi Alba oo shaaca ka qaaday magacyada saddex tababare oo si weyn kaga caawiyay xirfadiisa kubadda cagta
In aaladda VAR aan la isticmaali doonin, in beddellada la kordhin doono & Xeerarka cusub ee Premier League loo isticmaali doono
Muxuu yahay qorshaha Liverpool ee Sadio Mane xilli la la xiriirinayo Real Madrid?
Man United oo go’aansatay lacagaha ugu dambeyn ay ku qarash-gareynayaan saxiixa Saul Niguez
Kaddib ciyaartii xalay, Pogba oo si toos ah loo waydiiyay haddii uu ku biirayo Real Madrid… (Muxuu ku jawaabay??)
Haaruun April 11, 2019
(Manchester) 11 Abriil 2019. Paul Pogba ayaa si toos ah loo weydiiyey haddii uu u dhaqaaqto kooxda Real Madrid kaddib kulankii xalay ay Manchester United guuldarrada 1-0 kala kulantay naadiga Barcelona ee Champions League.
Kaddib guuldarradii ka soo gaartay xalay Barcelona, Paul Pogba ayaa la weydiiyey haddii uu ku biirayo kooxda Real Madrid, waxaana jawaabtii uu bixiyey ay ahayd mid farxad gelisay taageerayaasha Man United.
Xiddiga khadka dhexe ee reer France iyo kooxdiisa Man Utd ayaa kulan adag oo ay xalay ku marti geliyeen garoonka Old Trafford naadiga Barca, waxaa loo adkaatay gool madi ah oo uu iska dhaliyey daafacooda Luke Shaw.
Kulanka kaddib ayaa Pogba waxa uu bixiyey wareysi, iyadoo lagu weydiiyey haddii uu u ciyaarayo Real Madrid, Jamaahiirta Man United ayaana jeclaaday jawaabtiisa.
Wariye ka socday El Chiringuito TV ayaa weydiiyey Pogba: “Ma jeclaan lahbayd inaad El Classico ku wajahdo Barca?”
“Haa markii aan ciyaareyno Champions League had iyo jeer waa ay wanaagsan tahay inaad jawahdo Barca, waa riyada qof walba.” ayuu yiri Pogba.
Kaddib waxaa Pogba la weydiiyey su’aal toos ah oo ku saabsan wararka xanta ah ee la xiriirinaya Madrid, laakiin waa uu diiday inuu ka hadlo.
“Kama jawaabayo middaa.” ayuu yiri, isagoo intaa raaciyey: “Kaliya waxaan ka hadlayaa wax ku saabsan kulanka, wax kale ma jiraan.”
Mustaqbalka Pogba ee kooxda Manchester United ayaa fadhin, kaddib markii ku guuleystaha Koobka Adduunka uu shaaca ka qaaday inuu jecel yahay u ciyaarista Real Madrid mustaqbalka.
Intii uu ku guda jiray waajibaadka qarankiisa, waxa uu qirtay inuu ku faraxsan yahay Man United, inkastoo uu doonayo inuu mar xifaddiisa ka mid ah u dhaqaaqo garoonka Bernabeu.
“Waqti xaadirkan waan ku faraxsanahay Manchester,” Paul Pogba ayaa sidaa yiri, waxaana uu intaa ku daray: “Waan ciyaaraa, tababare cusub ayaana jooga.”
“Real Madrid waa mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Adduunka, waxaan mar walba dhahaa waa koox uu ku riyoodo ciyaaryahan walba.”
Tan iyo markii uu Zinedine Zindane dib ugu soo laabtay xilka tababarennimo ee Real Madrid oo uu shaqada ka bedelay macallinkii la cayriyey ee Santiago Solari waxaa shaaca laga qaaday in hoggaamiyaha reer France uu doonayo saxiixa Pogba.
RASMI: Laacibkii hore ee Liverpool, Chelsea iyo Arsenal, Yossi Benayoun oo isaga fariistay gabi ahaanba kubadda cagta
Arsenal oo guul wax ku ool ah ka gaartay Napoli iyo Chelsea oo guul dirqi ah ka gaartay Slavia Prague +Sawiro